रहेनन् शिक्षाका धरोहर चिन्ताबहादुर बुढाथोकी « Farakkon
तुलसीपुर, मंसिर ५ । नेपाल शिक्षक संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष चिन्ताबहादुर बुढाथोकीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । उपचारका क्रममा ६७ बर्षीय बुढाथोकीको गएराति ११ ः ५० बजे कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पिसिआर परीक्षणका क्रममा उनलाई कात्तिक २६ गते कोरोना संक्रमन पुष्टि भएको थियो ।
त्यसपछि बुढोथोकीलाई स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि उपचारका लागि कोहलपुर लगिएको थियो । बुढाथोकीलाई केही समयदेखि उच्चरक्तचापको समस्या रहेको थियो । स्वर्गिय बुढाथोकी नेपाल शिक्षक संघ दाङको अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक यूनियन दाङको जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला शिक्षा समिति दाङको सदस्य, सार्क स्तरीय शिक्षक युनियनको कोषाध्यक्ष समेत भएका थिए ।
बुढाथोकी शिक्षा मन्त्रालयबाट २ पटक पदक तथा सम्मान पत्रबाट सम्मानित भएका व्यक्ति हुन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बनगाउँ निवासी बुढाथोकी सिद्ध रत्न नाथ नमूना मावि नारायणपुर दाङमा २०३४ सालमा माध्यमिक तहको नियुक्ति पाएपछि शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका थिए । माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा बढुवा भई विद्यालयको सहायक प्रधानाध्यापक हुँदै प्रधानाध्यापक भएका थिए ।
२०७३ मंसिरमा अवकास प्राप्त भएपछि बुढाथोकी सोही विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भएर काम समेत गरेका व्यक्ति हुन ।
तुलसीपुर बेलुवाका ६८ बर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु
कोरोनाका कारण दाङ तुलसीपुरका अर्का एक व्यक्तिको पनि उपचारका क्रममा बाँकेमा मृत्यु भएको छ ।तुलसीपुर उपमाहानगरपालिका वडा नं. ९ बेलुवा निवासी ६८ बर्षीय पुरुषको बुधवार विहान १ ः ४० बजे कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ती व्यक्तिलाई मंसिर ४ गते उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई मंसिर ५ गते कोरोना संक्रमन पुष्टि भएको थियो ।
मृतक केही समयदेखि मधुमेह रोगबाट ग्रसित रहेको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकेमा हालसम्म जिल्ला बाहिरवाट उपचारका लागि बाँके लगिएका मध्य ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा ९ महिला र ३७ पुरुष रहेका छन् । त्यस्तै बाँके जिल्लाका मात्रै थप ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । बाँकेमा १५ महिला र २३ पुरुषको मृत्यु भएको छ । फोकल पर्सन श्रेष्ठका अनुसार आइतवार विहानसम्म बाँकेमा ८४ जना कोरोना संक्रमतिको मृत्यु भएको छ ।